प्रिन्स दुई बिधाको फाईनलमा – KhabarPurwanchal
खबर पूर्वाञ्चल, २५ पुष २०७६, शुक्रबार १७:२८
काठमाण्डौं / नेपालका उदियमान खेलाडी प्रिन्स दाहाल काठमाण्डौमा जारी प्रेसिडेन्ट कप नेपाल ईन्टरनेशनल सिरिज २०२० को दुई बिधामा फाईनल प्रवेश गरेका छन् । दाहाल पुरुष एकल र जोडी दुबैतर्फ फाईनल प्रवेश गरेका हुन् ।
प्रतियोगितामा दोश्रो बरियता प्राप्त तथा बिश्व जुनियर बरियतामा १४ औं स्थानमा रहेका दाहाल सेमिफाईनलमा भारतका अभिन बशिष्ठ माथि २१–१८, २०–२२, २१–१७ को जित निकाल्दै उपाधि नजिक पुगेका हुन् । अव प्रिन्सले उपाधिका लागि यस प्रतियोगिताका पहिलो बरियता तथा बिश्व जुनियर बरियतामा तेश्रो स्थानमा रहेका भारतका मिरबा लुवाङ्गसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । लुवाङ्गले श्रीलङ्काका दुमिन्दु अबेविक्रमालाई २१–१२, २१–८ ले पराजित गर्दै फाईनल प्रवेश गरेका थिए ।
दाहाल पुरुष युगलमा पनि फाईनल प्रवेश गर्न सफल भएका छन् । पेम्बा शेर्पासंग मिलेर दाहालले आफ्नै देशका अमृत चौधरी र जे.बी. साउदलाई २१–१०, २१–११ ले पराजित गर्दै फाईनल प्रवेश गरे । अर्को प्रतिस्पर्धामा भारतका आर. बिकास प्रभु र अरुण कार्थिक के.को जोडीले श्रीलङ्काका दुमिन्दु अबेविक्रमा र दिगायु कहातापितियाको जोडीलाई २२–२०, २१–१५ ले पराजित गर्दै दाहाल र शेर्पाको जोडी संग उपाधीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।
महिला जोडीतर्फ नेपालका बिष्णा बिष्ट र प्रसुना खत्रीको जोडीले नेपालकै रोन पाण्डे र अलिना सुनारबाट वाक ओभर प्राप्त गरे । बिष्ट र खत्रीको जोडीले फाईनलमा भारतका ग्नन्दा के. र सानिया सिकन्दरको जोडीसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । भारतीय जोडीले नेपालका निता लम्साल र सिमा राजबंशीको जोडीलाई २१–८, २१–१२ ले पराजित गरे ।
मिश्रीत जोडीतर्फ पनि मिर आयन रशिदसंग मिलेर फाईनल प्रवेश गर्न सफल भईन् । उक्त जोडीले नेपालका गोकुल जोरा र निता लम्सालको जोडीलाई २१–१२, २१–११ ले पराजित गरे । अर्को प्रतिस्पर्धामा भारतकै मुरुगप्पा के.एस. र सानिया सिकन्दरको जोडीले नेपालका पेम्बा शेर्पा र सिमा राजबंशीको जोडीलाई २१–२, २१–११ ले पराजित गर्दै मिर र रशिदको जोडी संगको भेट पक्का गरेका हुन् ।